Praia de Santa Maria: tonga tany Cabo Verde livery vaovao
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Praia de Santa Maria: tonga tany Cabo Verde livery vaovao
Enga anie 12, 2019
Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Nelson Mandela ao Capem Verde ny 'Praia de Santa Maria' ny zoma alina lasa teo nitondra mpandeha 134 tao anatiny.
"Praia de Santa Maria", izay nofidin'ny mpandeha tamin'ny alàlan'ny fitsapan-kevi-bahoaka tao amin'ny Facebook, dia manana ny anarany ho fanomezam-boninahitra ny iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary ao Cape Verde izay morontsiraka fanta-daza any Santa Maria any amin'ny nosy Sal, hub an'ny zotram-piaramanidina ankehitriny.
Voaravaka loko manga sy pastel, ny marika vaovao dia fifangaroana malefaka amin'ny hatsaran'ny singa voajanahary sy ny gadon'ny kolontsaina Cape Verdian, miaraka amin'ny lokon'ireo trano hita any amin'ireo nosy.
Ny loko misy ny loko anatiny sy ivelany an'ny fiaramanidina dia mampiseho fa ny fiovana dia avy ao anatiny, amin'ny fikasana hanompoana bebe kokoa ny mpanjifany ary hitondra an'i Cape Verde ho an'izao tontolo izao sy izao tontolo izao any Cape Verde.
Ny "Praia de Santa Maria" dia hanana seza 12 ao amin'ny tranobe premium ary seza 180 ao amin'ny seza kabine lehibe no azo ovaina sy mahazo aina.
Amin'ny fahatongavan'ilay "Praia de Santa Maria", fiaramanidina telo an'ny Cabo Verde Airlines 757-200 ary mikasa ny handray roa hafa amin'ny faran'ny taona.
Ny fandraisana ny fiaramanidina dia ampahany amin'ny fandaminana indray ny zotram-piaramanidina hatramin'ny nahavitana ny privatisation azy tamin'ny 1 martsa 2019.
Naman'ny Birao Fizahantany Afrikana naman'ny Tambajotra Media izao any amin'ny firenena 28
Nanafika hotely kintana dimy ireo mpanohitra mitam-bola amin'ny fampiasam-bola sinoa any Pakistan